ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး ဆက်လက်ဆန္ဒပြ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး ဆက်လက်ဆန္ဒပြ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
KO Han Win Aung' Photos
“မနက်ပိုင်းမှာ မြေပဲဆွတ်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ စစ်ခရိုနီကို ဆန့်ကျင်မယ်”
(၂) တိုင်းပြည်နဲ.ပြည်သူတွေ အကျိုး မများလှဘဲ စစ်တပ်
အကြီးအကဲ များရဲ. ပင်မအကျိုးစီးပွားကိုပံ.ပိုးကူညီခြင်းဖြင်. ဒီမိုကရေစီ
တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ကမ္ဘာသိ ခေါင်းဆောင် တယောက်
ပြန်လည် သုံးသပ်စေလိုတာ .........
..... မီးရှို.ခံ သံဃာတွေဘက်က ကိုယ်ချင်းစာ စဉ်းစားကြည်.ပါ
...... တိုင်းပြည် ဘက်ကစဉ်းစားကြည်.ပါ ၊ နိုင်ငံတော်ကပေးလိုက်ရတဲ. ကြေးနီ နဲ. ၊
ရတဲ.ငွေ (ဦးပိုင်ရတဲ.ငွေမပါ) နဲ. ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝပျက်စီးတာနဲ.၊ တန် ရဲ.လား ?